Amigo: New Richard Garfield Game Inowanikwa Kubva munaJune - Gamepoint - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 11, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, crowdfunding, nhau
Bata mutsva wetsutso mumaoko ako mwedzi isati yasvika zuva rekuburitswa? Kubva munaJune, chishuwo ichi chinogona kuzadzikiswa nemutambo wedhayisi naRichard Garfield kubva kune vanonzi Amigo shamwari mukutengesa matoyi. Icho chirongwa chekusimbisa stationary retail
Sekureva kwaDietzenbacher Verlag, shamwari dzeAmigo vatengesi vematoyi avo "vanorarama" mhando yezvigadzirwa zvavo, vanoda kutamba uye avo Amigo ave aine hukama hwakanaka hwebhizinesi kwemakore mazhinji.
Dice Magamba: Kubva munaChikumi 1st muzvitoro zvakasarudzwa
Kana iwe usingade kumirira kusvika Gunyana kuti utambe mutambo mutsva waRichard Garfield, Würfelhelden, unogona kuwana zvauri kutsvaga muzvitoro zveshamwari dzeAmigo kubva munaChikumi 1. Magamba edhayisi anotenderwa kutengesa izvi muzvitoro zvavo mwedzi mitatu isati yaburitswa zviri pamutemo.
NeDice Magamba, vatambi vanotsvedza kuita gamba kana gamba uye, pamwe neboka ravo, vanobata villains vari kuita zvakaipa muumambo. Nerombo rakanaka redhizi, vanochengetedza mibairo kana kuwana hupfumi hwakakosha.
Chirongwa cheAmigo Shamwari chakatangwa muna 2021 naDietzenbacher Spieleverlag uye chakanangana nekuzvipira uye kwenguva refu vadyidzani mukutengesa matoyi. Havasi ivo chete vanogara vaine mukana wekutengesa chete Amigo hunyanzvi pachine nguva, ivo vanogashira Amigo Shamwari Bhokisi kamwechete pakota. Iine zvipo zvekupa kune vatengi vako, makadhi akakosha uye mitambo yekuravira kana zvinhu zvekushongedza zvebhizinesi rako.
Cube Heroes mutambo wemadhaisi wevatambi vaviri kusvika vana vane makore masere zvichikwira. Tsigiro inodiwa muumambo hweTherion kuitira kuti rugare nerunyararo zvidzoke. Vatambi mumwe nemumwe anotungamira chikwata chemagamba emhuka kuvhima baddies. Chinangwa: mubayiro wemuchinda. Kukunda kunogona kuitwa nenzira dzakawanda.
AMIGO Spiel + Freizeit 02000 Chili Dice dice game * 6,49 EUR tenga
Kare Mattel anozivisa He-Man uye The Masters of the Universe paRoblox
Inotevera Terraforming Mars: Dhijitari bhodhi mutambo wakawedzera kuti ubatanidze Hellas & Elysium
Oranienburger Kanal: Neuer Rosenberg sevanhu vakawanda
Munchkin anoenda Warhammer 40.000: Pegasus Spiele inoburitsa nhungirwa
Crowdfunding: 4X bhodhi mutambo Iyo Warp iri kushanda muSpieleschmiede